Ukuphupha ngokungenzi nto Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Thina bantu siyakuthanda ukuhlala kamnandi. Kwaye nokuba umntu akathandi ukusebenzisa igama "ubuvila", sisonwabela amaxesha ngamaxesha, ukubeka iinyawo zethu phezulu ngaphandle kokucinga kwaye ungenzi nto. Ukuba singayenza loo nto. Kungenxa yokuba amaxesha amaninzi izinto ezahlukileyo eza phakathi kwethu zisonakalisa uvuyo lokungenzi nto.
Ngaphezulu kwako konke, uninzi lwazo lunezazela ezinetyala ukuba zinokuthatha ikhefu elincinci ukuba liphuphe. Kufuneka uchele ingca yakho okanye u-ayine iimpahla zakho. Kwaye ukuba isazela sakho sicocekile, kunokwenzeka ukuba iqabane lakho okanye utata wakho asithethise kwaye azibuze ukuba akukho nto ilunge ngakumbi ukuyenza ngaphandle kokujonga umoya, xa umsebenzi ufumba yonke indawo nakuzo zonke iimbombo.
Ubuvila bunokumangalisa, ukuba ungabonwabela ngentliziyo yakho yonke. Ukuba kubonakala ngathi njengophawu lwephupha, ngasemva kwayo imikhombandlela emininzi enomdla inokufihlwa.
1 Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolikwa ngokubanzi
Yonqena kube kanye. Vumela ingqondo yakho ibhadule kwaye uphile usuku ngaphandle koxinzelelo ngokupheleleyo. Ubuvila bunokuziva bumnandi emaphupheni kangangokuba xa sivuka singathanda ukubuyela kwangoko kwilizwe lethu lamaphupha. Lo mfanekiso wephupha unokuvela kuthi xa ulele ngesizathu esithile.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, oku kuhlala kuthetha ukuba Qaphela yomntu ophuphayo ukuba lixesha lokwehla. Usenokuba ubunexinzelelo olukhulu ixesha elide. Okanye ucelomngeni kakhulu kubomi bemihla ngemihla ngomsebenzi kunye nezinye izibophelelo. Nangona kunjalo, umntu kufuneka akhumbule ukuba nomzimba ophilileyo unokujamelana noxinzelelo rhoqo ixesha elide.
Izigaba zokubuyisela kwimeko yesiqhelo zibalulekile kwaye ziyimfuneko emzimbeni nasengqondweni. Ke ngoko, uphawu lwephupha «ubuvila» lunokuqondwa njengesilumkiso, ngakumbi kwi Imiqondiso yomzimba Qwalasela. Abo bathatha ikhefu rhoqo banokufumana amandla kubo kwaye benze into elungileyo kwimpilo yabo.
Njengophawu lokulala, ubuvila bunokubonisa ukuba abantu abasondeleyo kuthi banathi ngoku ingxaki silwe kwaye ezi ngxaki zichaphazela nobethu ubomi. Kule meko, ukonqena kunokubonisa ukumodareyitha. Kufuneka unakekele abahlobo abanesidingo, kodwa gcina iimfuno zakho engqondweni.
Ukuba umphuphi uceba iprojekthi enkulu ebomini bakhe kunye namaphupha omfanekiso wephupha "ubuvila" ngeli nqanaba, kunokuba yinto ebaluleke kakhulu kutoliko lwephupha ukuba yena okanye omnye umntu uye wakhuthazeka ukuba angenzi nto. Ukuba liphupha elifanayo, moyikise ekuphunyezweni kwezicwangciso zakhe. imposiso bhukuqa. Oku kunokubangela ukuphoxeka okukhulu kwaye, kwimeko embi kakhulu, kunokukhokelela ekusileleni kweprojekthi yakho.
Ubuvila bomnye umntu bunokutolikwa gwenxa kule meko. Ukuba oku kuyabandakanyeka kwizicwangciso kunye nokuphunyezwa kwazo, kuya kufuneka ucinge ngononophelo malunga nokuba yeyiphi na imisebenzi obaphathise yona. Apha iimpazamo ezinzulu kunye nokungakhathali akunakuphepheka.
Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, umfanekiso wephupha "ubuvila" ngamanye amaxesha utolikwa ngendlela echaseneyo. Ukuphupha kufuneka kusebenze nzima kuba uya kufezekisa kuphela into ethile ngenkuthalo ebomini. Olona hlalutyo lwamva nje lwamaphupha, kwelinye icala, luthi ngobuvila ephupheni umntu onomdla kufuneka azi kwinqanaba lengqondo ukuba ubomi abubandakanyi nje kuphela umsebenzi kwaye kuyavunyelwa kwaye kuyimfuneko ukuba livila amaxesha ngamaxesha .
Kwizizukulwana ezidlulileyo, ubuvila bujongwa njengehlazo. Nanamhlanje ayicingeki into yokuba abantu abadala abaninzi bahlale phantsi kanye emini bengenzi nto. Kodwa abantu abancinci banakho ukuba nazo ezi nkolelo. "Akufuneki ndiphumle, kuba ngabo banamabhongo kwaye bahlala becinga kuqala ngomsebenzi wabo abanokufezekisa okuthile ebomini."
Umfanekiso wephupha "ubuvila" ungakhokelela Ukuqinisekiswa ezi ngcinga kwaye mhlawumbi unike umdla wokuzama ukonqena.
Uphawu lwephupha «ubuvila» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, umfanekiso wephupha "ubuvila" luphawu lwe ukuhamba kobomiapho umphuphi kufuneka azinikele ngokuzithemba.